Yaa’iin Dhaabbilee Amantaa Itiyoophiyaa Gondor Keessatti Taasfame Jira
Gumii waaltaalee Amantii Itiyoophiyaa
Eebla 26 ,2022 walti bu’iinsii magaalaa Gondor keessatti uumamee du’a namoottan hedduu fi manca’iinsaa qabeenyaatiif sababa ta’ee dhimmaa amantaa irraa kan madde akka hin taane yaa’iin dhaabbilee amantaa Itiyoophiyaa ibseera.
Barreesaan muummee yaa’ii dhaabbilee amantaa Itiyoophiyaa lubnii Taagaay Taadelee akka VOAti himanitti abootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, haanga’oonii mootummaa fi jiraattonni magaala Gondar wareen dhimichii ilaallatuu qibxataa dheengadaa marii taasisaniin wantti guyyaa sana uumamee baruumsaa amanataa Kirstaanaatiinis ta’e amanataa Isilaamaatiin waan hin degeramanee akka ta’e ibsaniiru.
Magaalaa gondor keessatti bakka awwaalchaa fi bakkaa manoottan amantaa ittii ijaaramanuun wal qabatee gaaffiwwan waggootaan 30 darbaniif dhihaachaa turan jiraachuu isaanii, gaafiiwwaan tokko tookoof deebiin kenmus > jechuudhaan gareewwan ijjannoo finxaalesyumaa qabatan jiraachuu isaanii Kantiibaan bulchiinsaa magaalaa Gondor obbo Zawuduu Maaledee ibsuu isaanii gabaasiin Masfin Arraagee ibseera.
Kantiibaan magaalichaa akka dabalanii ibsanitii , walti bu’iinsichaan walqabatee,namoonii qabeenyaa gubuudhaan, saamuudhaan,akkasumas namoottan reebuudhaan shakkaman 208,namoottaan dugda duubbee taa’anii gochichaa degeraa turan 33 fi waltii bu’iinsichaa babaldhisuu irratti kan hirmaatan miseensonii polisii,miseensonii nagaa eegdotaa fi hoggantoonii siyaasaa 9, walumaa galatti shakkamtoonii 250 too’anoo jala oolanii qorannoon irratti taasifamaa jira.
Yaa’ii Gondor keessatti taasifamee kana irrati,olaantumaan seeraa akka mirkanaa’u, itti gaafatamumman akka jiraatu, murtiin yakkamtootaa irratti darbuu ifatti akka himamu,maatiwwaan walitti bu’iinsichaan du’aniif gargaarsii akka taasifamu walii galtee irraa gahamuu isaa hoggantoonii yaa’ii dhaabilee Amantaa Itiyoophiyaa ibsuu isaanii gabaasnii Masfin Arraagee ibseeraa.
Yaa’iin dhaabilee Amantaa Itiyoophiyaa waldaalee amantaa 7n kan bu’uureffamee yemuu ta’uu amantootaa biyyatii dhibeentaa 97.3 kan bakka bu’u akka ta’e himameera.